အသံလွှင့်ဘိခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်သတင်း, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - - ခရစ် Ray ESPN ရဲ့ X ကိုဂိမ်းများရီးရဲလ်လမ်းလှုပ်ရှားမှုအားကစားပြိုင်ပွဲများအတွက်ရွှေဖမ်းဆီးဖို့ Cartoni ရွေးကောက် NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » ခရစ် Ray ESPN ရဲ့ X ကိုဂိမ်းများရီးရဲလ်လမ်းလှုပ်ရှားမှုအားကစားပြိုင်ပွဲများအတွက်ရွှေဖမ်းဆီးဖို့ Cartoni ရွေးကောက်
ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ ခရစ် Ray မော်ကွန်းရိုက်ချက်များဖမ်းယူထဲကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။
အဆိုပါစကိတ်စီးစက်မှုလုပ်ငန်း၌သူ၏စကနေတဟီတီအတွက်ဖုန်စက်ဘီးပေါ်ရော်ဘီကထုတ်တဲ့ Maddison လှိုင်းလှိုင်းတံပိုးကိုမြင် 30 သန်းအမြင်များစပါးကိုရိတ်သောဗိုင်းရပ်စ် hit '' Pipedream '' အပေါ်သူ၏အလုပ်, Ray ရဲ့ပြေးခြင်းနှင့်ရိုက်ကူးရေး၏သေနတ်စတိုင်သူ့ကိုအောင်မြင်သောစေပြီ။ သို့သော်လည်းအဘယ်သို့စကိတ်စီးခြင်းနှင့်အတူစတင်ခဲ့ပြီးအလျင်အမြန်နဲ့တူကုမ္ပဏီများနှင့်အလုပ်သို့တိုးချဲ့ထားပါတယ် DC ကဖိနပ်များ, NFL ရုပ်ရှင်, Ford ကား, GoPro, ESPN နှင့်ပိုပြီးအများအပြား။
"ငါသည်ယခုတစ်ခုတည်းသောစကိတ်၏အပြင်ဘက်တွင်ဤမျှလောက်လုပ်ပေး - ကြော်ငြာနှင့်ဤမျှလောက်များစွာသောအခြားအမှုအရာတို့ကို," အဋ္ဌမတန်း၌သူ၏ပထမဦးဆုံးစကိတ်စီးသောဗီဒီယိုပစ်ခတ်သူကို Ray, ရှင်းပြသည်။ "ဒါကကျနော်မှ လာ. ဘယ်မှာငါ့ကိုသတိပေးနေပါတယ်။ ငါကိတ်ဘုတ်စီးခြင်းမှအများကြီးအကြွေး။ "
ray ထဲမှာယှဉ်ပြိုင်ရန်သူ၏အမြစ်တို့တွင်အမှပြန်လာသော X ကိုဂိမ်းများ: ရီးရဲလ်လမ်း 2019တစ်ဦး all-လမ်း စကိတ်ဘုတ်စီးခြင်းကဗီဒီယိုပြိုင်ပွဲ။ စကိတ် Chase ဝက်ဘ်နဲ့သူ့ရဲ့ One-မိနစ်ဗီဒီယိုနှင့်ပူးပေါင်း Ray သူ၏ဒုတိယကိုရွှေနဲ့သူ့ X ကိုဂိမ်းများအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၏ပဉ္စမခြုံငုံတံဆိပ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာတကယ်စကိတ်ပေးသည်နှင့်ကြောင်းတည်းသောပြိုင်ပွဲရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ "ငါသည်အစဉ်အမြဲရီးရဲလ်လမ်းလုပ်နေတာခံစားင့် ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ တစ်ဦးပလက်ဖောင်းနှင့်ရွှေတံဆိပ်အနိုင်ရဖို့အခွင့်အလမ်း, "Ray ကပြောပါတယ်။ "ငါဘယ်နေရာမှာမဆိုတော်တော်လေးရှားပါးင်ထင်ပါတယ်။ ဤသည်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးဖို့အကြောင်းခြောက်လကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်သွားတယ်။ Chase ဒီတော့တစ်ဦးရွှေပင်ပိုကောင်းခံစားရနှင့်အတူထွက်သွားလမ်းလျှောက်ဖို့, ဒီပြိုင်ပွဲရဲ့အရှုံးသမားခဲ့ပါတယ်။ "
အနိုင်ရတဲ့ဗီဒီယိုမှာ, Ray, kinked ကွေးနှင့်ကြီးမားခဲ့သံလမ်းအပေါ် '' လာမယ့်အဆင့်ကို '' လှည့်ကွက်ဖမ်းဆီးဖို့ရှည်လျားသောမှန်ဘီလူးကိုသုံး! သို့မဟုတ်တဦးတည်းမှတ်ချက်ပေးသူ၏စကား Ray ရဲ့ရုပ်ရှင်ပညာဝက်ဘ်နှင့်စကိတ်စီးခြင်းကိုယ်တိုင်ဟောပြောပါလေစေ "တစ်စုံတစ်ဦးကမာစတာခွဲထွက်အဖွဲ့ကိုပဌနာ ... ငါ Shredder ။ တွေ့ရှိရ" ။
"ဒါဟာ 60-ဒုတိယပြင်ဆင်ရန်ဖွင့်ပေမယ့်ငါကြိုးစားပါကအပြည့်အဝဗီဒီယိုလျှင်ကြောင့်ခံစားရပါစေ," Ray ကပြောပါတယ်။ "ဒါဟာတစ်က start ရှိပါတယ်; က finish ကိုရှိပါတယ်။ ငါကိတ်သို့မဟုတ်အားကစားသမားတစ်ဝှမ်းအလုပ်မလုပ်ခြင်းနှင့်သွားကြဖို့, ငါ့ပစ္စည်းကိရိယာများအဆင်သင့်ရှိသည်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါ။ အရာအားလုံးတော်တော်လေးပြေးခြင်းနှင့်သေနတ်ဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ငါရိုက်ကူးသွားနှင့်ပါစောင့်ဆိုင်း '' ဟုဆိုယောက်ျားတွေအပေါ်ကျင်းပရန်မုန်းလိမ့်မယ်။ ငါသညျဤအဆင်သင့်ရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ '' ကိုယ့်သွားကြဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ချင်တယ်။ "
သူ့ကိုန်းကျင်ဖြစ်ရပ်များတုံ့ပြန်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ခြင်းအလွန်ဆည်းကပ်အဖြစ် Ray ထူထောင်ထားပါတယ် ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ။ သူကအဓိကစကိတ်စီးအမှတ်တံဆိပ်များအတွက်ဗီဒီယိုမဟာဗျူဟာဦးတည်သွားစေရန်ဆက်လက်နေစဉ်, DC ကဖိနပ်များ, Ray ယခုကုမ္ပဏီအများအပြားနှင့်အတူရိုက်ကူးနေပါတယ်, ဒါပေမယ့်တဦးတည်းသူအချိန်ကြာမြင့်စွာ, NFL ရုပ်ရှင်အဘို့အငျကိုးကှယျရဲ့။ မိမိအကိရိယာအစုံမှာတော့သူသိတယ်ထုတ်ကုန်သူကလိုအပ်ပါတယ်တဲ့အခါမှာဖျော်ဖြေဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်ကိုးစား။ Ray ရဲ့ပြေးခြင်းနှင့်သေနတ်ကိရိယာအစုံမှာတော့သူဟာအနီရောင်က Epic, Core ဘက်ထရီလည်းပါဝင်သည်နှင့်ရှည်လျားသောမှန်ဘီလူးနဲ့ Ultra-တည်ငြိမ်မှုလိုအပ်ကြောင်းရိုက်ချက်များအဘို့, သူကရှေးခယျြ Cartoni အာရုံစိုက် 22 ။
"ဒီ focus 22 ငါ၏အသွားလာရင်းမှ tripod ဖြစ်ပါတယ် "ဟု Ray ကပြောပါတယ်။ ငါဒီရက်ကို အသုံးပြု. တာပါအဆိုပါကင်မရာများအများကြီး, ဧဒုံက Epic ကဲ့သို့စကိတ်ဘုတ်စီးခြင်းများအတွက်လက်ကိုင်သွားဘို့အလွန်ကောင်းမဟုတ်လို့ပဲ။ "ဒါဟာငါ့ကိုရန်အရေးကြီးပါသည်င် ငါရှည်လျားသောမှန်ဘီလူးကို အသုံးပြု. တယ်ဘယ်အချိန်မှာအခါ, ထိုင် focus 22 ကြွလာ။ ဒါဟာပြီးပြည့်စုံသောပါပဲ။ ငါမှမကောင်းတဲ့ tripod မှ switched သောအခါငါသတိရ Cartoni, ထိုသို့မယ့်ငါ့အကိုကင်မရာမိုဃ်းတိမ်ကိုစီးမျောနေခဲ့ပါသည်ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့ပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်လိုချင်တာတွေပါပဲ။ သင်သည်သင်၏ရိုက်ချက်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်လှည့်ကွက်လူရှုပ်သွားကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုမလိုချင်ကြဘူး။ ကြှနျတေျာ့ကိုကင်မရာနှင့်အတူချောမွေ့စွာလှုံ့ဆျောတဲ့ tripod အသုံးပြုခြင်းငါ့အဘို့ကြီးမားလာခဲ့သည်။ "
လက်ျာဘက်ဂီယာရှိခြင်း Ray ရိုက်ချက်ရရှိသွားတဲ့ကူညီပေးသည်, ဒါပေမယ့်သူကချစ်သောသူဘာလုပ်နေလဲနှင့်အခွင့်အလမ်းတွေကိုယူပြီးအားမိမိအောင်မြင်မှုဂုဏျ။
အစဉ်မပြတ်ငါသင်သည်သင်၏အိပ်မက်နားလည်သဘောပေါက်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည့်အခါကမ်ဘာပျေါတှငျ scariest အရာကြောင့်ငါအသစ်တခုအခွင့်အလမ်းနှင့်အတူချဉ်းကပ်တာသည့်အခါမျှမပြောချင်သောကွောငျ့ "ဒါဟာရယ်စရာပါပဲ။ သငျသညျသူတို့အားအခွင့်အလမ်းများကိုသိမ်းယူနှင့်ထိုအခွင့်အလမ်းတွေကိုယူဖို့လုံလောက်တဲ့သတ္တိဖြစ်ဖို့ရှိသည်။
Manios ဒစ်ဂျစ်တယ် ၏သီးသန့်အမေရိကန်ဖြန့်ဖြူးဖြစ်ပါသည် Cartoni. ခရစ် Ray, အလည်အပတ်ခရီးအတိုင်းလိုက်နာရန် chrisrayfilms.com.
ထုတ်လွှင့်-SocialMeida Cartoni CineGear ESPN ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor manios ဒစ်ဂျစ်တယ် Manios ဒစ်ဂျစ်တယ် & ရုပ်ရှင်ပွဲတော် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း Xgames	2019-05-24
နောက်တစ်ခု: အသုံးချအီလက်ထရောနစ်နှင့်အတူ axon အပေါင်းအဖေါ်များကနေဒါရော Extend မှ